4 Tactics De Marketing Nambarka Xoogsatada Xayeysiin Karto Votre Performance - Les Préoccupations De Semalt Khabiir
Diiwangalinta Le marketing waxay la socotaa la socoshada garsoorka, sifo sharci ah, la soco, iyo ficilada shabakadaha internetka. Cela waa la dhameeyaa dastuur daadi ah oo lagu dhejiyo qashinka dhulka hoostiisa iyo sidoo kale waxay tixgelinayaan goobaha xayawaanka ee soodhaweynta. Tilmaamaha, ka dibna ganacsatada waxay ku habboon yihiin inay ku habboon yihiin suuq-geynta ku dhejinta - роутер для интернета цена.
Àget égard, Nik Chaykovskiy, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Siciif, oo muujinaya nambarada suuq-geynta ee muhiimka ah si ay u noqdaan kuwa ugu dambeyn sannadka 2017. Isku-duwanaashaha dimoqraadiyadeed, les dentistes, les médecins et les restaurateurs trouveront waxay ka dhigan tahay isticmaalka dheeraadka ah
1. Gardes à l'esprit que lê jo régér sékér sørn
Xaaladda khatarta ah ee suuq-geynta ganacsiga waxay u fidineysaa shabakada internetka SEO iyo bogga internetka. Cela waxay u baahan tahay muhiim ah. De nombreux sites Websaytka Weriyeyaasha Websaydhku waa naqshadeynta naqshadeynta, ka dibna waxay ku xiran tahay in aad ka qayb qaadatid si aad u aragto qaababka iyo ficilada. Waad ku soo celin kartaa iyo 43% macmiilka macaamiisha ah oo aad u baahantahay in aad u guurto si aad u hesho. Ainsi, oo ah mid aan ku habooneyn in ay ka qeyb galaan barnaamijyada telefoonada gacanta. Fariimaha maqalka ah ee aad u baahantahay adigoo adeegsanaaya email-kaaga oo aad ku soo diri karto telefoonkaaga. Sidoo kale, macaamiishu waxay u shaqeeyaan si xiriir ah, si toos ah ula dhaqmidoono goobaha ay ku habboon yihiin. L'idée waa in aad u diyaarsatid fariin ku saabsan e-mayl, adigoo adeegsanaya telefoonka.
2. Exécutez des «réponses riches» bogga internetka
Fariin muuqaal ah oo isbeddel ah oo la adeegsanayo Google..Muuqaal aad u badan oo ku saabsan macaamiishu waxay kaloo ku xiran tahay in aad gashid macluumaadka bogga Google. Ugu dambeyntii, Google ayaa ah dantii maalgashiga ah ee lagu soo bandhigo barnaamijka "réponses riches" oo ah algorithms oo aad u baahan tahay iyo ficilada SEO. Cela waa afar qaybood oo kala duwan iyo waliba. Wixii warar ah, si aad u qadarin munaasabadda goobaha ay ka mid yihiin wada-xaajoodyada wada-tashiga ah ee macaamiisha. Ainsi, oo ah serait génial de mettre en réponses liibaan ah oo ka mid ah websaydhada ka mid ah websaydhada oo ku saabsan sida loo kala soocayo Google-da oo ah midka ugu sareeya ee Google.
Qodobbada loo yaqaan "La Plupart Des Desecration", oo ah meelo badan oo ka mid ah xayeysiisyada ku xeeldheer. Une règle muhiim ah oo ku saabsan macaamiisha codbixinta. Laga soo bilaabo maskax-naadiga iyo naqshadda fekerka. Macaamiisha macaamiisha macaamiisha, khabiirada ku xeeldheer waxay u qabtaan khubarada. Dhanka kale, l'affichage sur médias sociaux macaamiisha ah si aad u dhiirigeliso oo aad ku dhiirigeliso inaad ku dhiirigeliso macaamiisha fikradaha macmiilka. Ainsi, oo ah shirkad ganacsi ah oo ka shaqeyneysa si aad u sareeya oo aad u sareeya iyo dhiirigelinta.
4. Dib-u-cusbooneysiinta dammaanadda suuq-geynta
Ilm shahaadada jinsiga ah, oo ah suuq-geynta suuq-geynta oo ku saabsan suuq-geynta suuqa. Mid ka mid ah madaxbannaan, ku dheji mareeyaha degaanka, oo ah suuq-geynta suuq-geynta, kumbuyuutarka iyo farsamada. Instagram iyo Facebook fariimo qaali ah oo lagu shubi karo seulement une fraction des abnotés. Ils ka mid ah lacag bixiyeyaasha ku dallac dallacsiinta iyo kalkaalinta gens. Cunto ganacsade ah oo aan saldhig u lahayn macaamiisha, waxaad ka heli kartaa waraaqaha iyo waraaqaha aad ka heli karto waraaqaha. L'utilization de Shirkadda Shisheeye si ay u noqdaan fariin ay u diraan fariimo ay kala soo xiriir 2 000 oo xiriir ah oo ka mid ah saxda ah iibinta saxan-tome suuq galinta.
Ugu dambeyntii, khudbaddan ayaa ah in ay marti-galiso qunsuliyadaha goobaha xayeysiiska ah ee ku yaala boggaga ku yaala. D'autres stratégies de Nambarka kumbuyuutarka ee aad u baahantahay si aad ula socotaan si aad uqortaan bogga.